कमजोर कांग्रेसलाई अवसर « News of Nepal
कमजोर कांग्रेसलाई अवसर
दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार वाम गठबन्धन अघि देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन निकै पछि परेको छ । सो पार्टीका ‘हेबी वेट नेताहरू’ रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, डा. शेखर कोइराला पराजित भएका छन् । नवीन्द्रराज जोशी, मोहन बस्नेत, बलबहादुर केसी, रामहरि खतिवडालगायतका युवा नेता पनि निर्वाचनमा पराजित बनेका छन् ।
यसअघिका विभिन्न निर्वाचनमा पटक–पटक दोस्रो दल बने पनि राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण मियो बनेको कांग्रेस इतिहासमा पहिलोपटक कमजोर बनेको छ । मुलुककै पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर इतिहास रचेको सो दलको अवस्था यो निर्वाचनमा यति धेरै खस्किन्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिएनन् । तर, अनुमानलाई गलत सावित गर्दै वामपन्थी गठबन्धनले दाबी गरे जसरी नै वर्षौं पुराना कांग्रेसका गढ तोडिएका छन् । मुलुककै पुरानो दल कांग्रेसको नेतृत्व इतिहासमा पहिलोपटक निकै कमजोर भएको छ ।
‘सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थीको दिगो सरकार’ को नारा अघि सार्दै चुनावमा होमिएका एमाले र माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रारम्भिक चुनावी नतिजाले पुष्टि गरेको छ । कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निधो भएको छ । चुनावी परिणामले कांग्रेसलाई रचनात्मक, जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । यस्तो भूमिका संसद्मा मात्रै होइन, सडक, मतदाता, कार्यकर्ता, पार्टीका शुभेच्छुकले पनि महसुस गराउन सक्नुपर्छ । वैचारिक दृष्टिकोणलाई समेत समय सापेक्ष परिस्कृत गर्दै अघि बढेको अवस्थामा मात्रै पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीको परिपक्वता झल्किन्छ । अहिलेको निर्वाचनमा कांग्रेस असफल बन्ने कारणहरू धेरै छन् ।
त्योमध्ये पार्टीको कमजोर आन्तरिक संगठन पनि एक हो । कांग्रेसमा नेता हावी भएको र संगठन फितलो भएको भनेर पटक–पटक आलोचित हुँदै आएको थियो, त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावसमेत अहिलेको निर्वाचनमा परेको छ । प्रायः निर्वाचन र महाधिवेशनको समयमा मात्रै स्थानीय तहमा पुग्ने सो दलका नेतालाई यो निर्वाचनले पार्टी संगठन सवल र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पाठसमेत सिकाएको छ । सो दलको नेतृत्व, नेता सबैलाई प्रस्ट थाहा छ, पार्टीमा पुनर्संरचनाको खाँचो छ । तर, वर्षौंसम्म सत्ताको वरिपरि रहँदा यो कुरामा कांग्रेस नेतृत्व कहिल्यै गम्भीर भएन । त्यसैले पार्टीले त्यो मौका पाएको छ । बीपी कोइराला, गणेशमान र अन्य नेताको योगदान र गुणगान दोहोर्याएर मात्रै पार्टी पुरानो लयमा फर्कंदैन भन्नेमा वर्तमान पार्टी नेतृत्व र सो दलका नेताले मनन गर्नैपर्छ ।
सरकार असफल भए मुलुक नै असफल
विपद् व्यवस्थापनमा संवेदनशील बन
कारबाही प्रकृया पनि अघि बढाऊ
बारको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी अभियान शुरु
२१ फरार प्रतिवादी पक्राउ
चलचित्र ‘कबड्डी ३’ मा प्रदीपको इन्ट्री, दयाहाङ यथावत्